၃D ကားဂိမ္း:အခမဲ့ Xxx လိင်ဂိမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်း
မင်္ဂလာပါအဲဒီမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:၃D ကားဂိမ္း။ ယနေ့ငါသွားဖို့ပြောနေတာအကြောင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှရတယ်ဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ချင်စေခြင်းငှါတက်လက်မှတ်ထိုးရန်။ အရှည်ဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ရှာဖွေရန်လျောက်ပတ်သောနေရာများမှကြွလာသောအခါအပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းအရည်အသွေးအ ၃D လိင်ဂိမ်းများ။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်း၊အဖြစ်ပေးစေဖို့လက်လှမ်းယံပလက်ဖောင်းခရီးမှမြှုပ်နှံအဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းခေါင်းစဉ်။, ပြီးပြီဆိုရင်ရှာဖို့ရုန်းကန်လျောက်ပတ်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုယ်နှင့်အလိုအဘယ်အရာကိုမြင်တယ်ပူဇော်ရန်၊ထို့နောက်သင်ပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးထက်သည်ကိုသိမှတ်မှကျေနပ်ပါသင်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့အသုံးျပဳကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်! ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းအတွက် ၃D ကားဂိမ္းဒါပေမယ့်အခုတော့ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတွင်အဆင်သင့်ပေးကျွန်တော်တို့၏အကောင်းဆုံးစုဆောင်းခြင်းလိင်ဂိမ်းများ။ တိပေးမပေးနိုငျတာခံရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြောင်းကတိပေးလိမ့်မည်ဟုအရာများကိုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားစွဲဂိမ်းကောင်းမြတ်ခြင်း။ ပါဘူးကြောင်းတစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား?, ကောင်းစွာအလာအပေါ်စူးစမ်းအံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ၏၃D ကားဂိမ္း! ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ပိုသိရိုးရိုးဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်အောက်တွင်ချပေးမယ်အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းအကြောင်း၊အဘယ်ကြောင့်သင်ကချစ်ကြလိမ့်မယ်!
ကတည်းကကျွန်တော်တို့စတင်အလုပ်လုပ်အပေါ်ဤစီမံကိန်း၊အရေးအပါဆုံးအရာသည်ငါတို့အဘို့ကြီးသောသေချာအောင်အဆိုပါဂရပ်ဖစ်၍လုံးဝပြည့်စုံသော။ သင်မှထမြောက်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဂိမ်း၊သင်မူကား၊ဘယ်တော့မှမနိုင်မှထမြောက်ဆင်းရဲဂရပ်ဖစ်! အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ညွှတ်ရေးအင်ဂျင်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဂိမ်းကစားကျနော်တို့အတွက်အမြင်အာရုံ။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီလွယ်ကူသည်၊ဒါပေမယ့်အားဖြင့်ငှားရမ်းအကောင်းဆုံးလူများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်၊ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချတယ်သောအဖွဲ့ပြသဖို့ပဲသင်မည်သို့ကြီးလျော်သောညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။, မေ့လျော့၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းနှင့်အတူအဟောင်း၊အနိမ့်အရည်အသွေးပြည့်ဂိမ်းများ-ရိုးရှင်းစွာတက်လက်မှတ်ထိုးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီနေ့သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်! ကျွန်တော်တို့သံသယရှိသောပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကျနော်တို့ဖွယ်ရှိအစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူပြိုင်ပွဲအတွက်အာကာသမှကြွလာသောအခါၾကည္လင္ျဂရပ်ဖစ်၊ကြဖို့ရှိသည်သွားဖို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတွန်းအားပေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံလူအားလူသိများ။ ဒါဟာမည်မဟုတ်တစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့၌စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူထိပ်တန်းအဆင့်ဂိမ္းင့်နှင့် ၃D အရည်အသွေးအာရုံစိုက်။, မှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးရ၏ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အၡမ်ားဂိမ်းကစားဂရပ်ဖစ်လိမ့်မည်!
ဒါဟာဖို့အလွန်အရေးကျွန်တော်တို့မှာ ၃D ကားဂိမ္းများကိုသင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူခေါင်းစဉ်အနှံ့အပြားကွဲပြားခြားနားသောမက်ထရစ်။ သဘာဝအရ၊ကျွန်တော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးခြင်းအမျိုးမျိုး၏အမျိုးအစား–ဤသည်တို့ပါဝင်သည်ပူဂိမ္း၊RPGs၊အရေးယူခေါင်းစဉ်နှင့်ချိန်းတွေ့ simulators။ ၃D ကားဂိမ္းလည်းကျူးလွန်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပေးအပ်ခြင်းအပေါ်သင်၏အကွာအဝေးဂိမ်းအရှည်။ အချို့လူများကသာရှာဖွေနေကစားကားဂိမ်းအတွက်မိနစ်အနည်းငယ်၊သော်လည်းအခြားသူများအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းသူတို့ကိုကြာအပြားဖြည့်စွက်ဖို့နာရီ။ ကြီးစွာသောအရာက ၃D ကားဂိမ္းကကၽြန္ေတာ္တိုများကိုနိုင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာ!, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနေပါစေအရာကိုအတိအကျသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ရနိုင်တယ်။ အဖြစ်ဝေးအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးဝင်အဖြစ်၊ကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်တို့မှာအကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်၏အပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ယုံကြည်တယ်မဟုတ်? ကတည်းကတက်လက်မှတ်ထိုးလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊အများကြီးသဘောမျိုးအလာအပေါ်အတွက်နဲ့ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်။ မထင်နှင့်အတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်? အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေ၊အဘယ်သူမျှမပုပ်။
သပ္ပါယ်္နှင့် GPU နည္းပညာ
သင်ဆိုရင်မပေါ်အစက်အမြင့်မားဆုံးသောအရည်အသွေးမစဉ်းစားသင့်ကြောင်းထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမှဝင်ရောက်ခွ ၃D ကားဂိမ္း။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ကျနော်တို့တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းယူကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အ္နှင့် GPU ဏာအသုံးပြုသူ၏။ အဘယျသို့ကဒီကိုဆိုလိုသည်သင်အဘို့အကြောင်းမည်သို့ပင်အမျိုးအစားထုတ်ကုန်သင်အသုံးပြုနေတဲ့နေကြတယ်၊သင်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ပျော်မွေ့မပါဘဲသူတို့ကိုမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အပြည့်နဲ့သိပ်ချစ်ကြောင်းဒီနည်းပညာကြောင့်လည်းခွင့်ပြုရန်လူဝင်မှတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ။, ပင်အဟောင်းတွေအလုပ္လုပ္ပါအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကနေလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဖြစ်သင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့အစု ၃D ကားဂိမ္းမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ အဆိုပါသပ္ပါယ်တဲ့နည်းပညာအပေါ်အလေးပေးလျှော့ချနာက္မွာေအရေအတွက်နှင့်သုတ်ဆေးများနောက်ခံအရုပ်အခါသင့်ရဲ့္နှင့် GPU လျက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအလွန်အကျွံ။ လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ဒီနည်းပညာကိုအတော်လေးရှားပါးရှာဖွေဖို့အတွက်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ကုန်အံ့တယောက်တည်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား။ ရှေ့ဆက်ရွေ့လျား၊ကျနော်တို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုသင်နှင့်အတူအလွန်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဂိမ်းအရေးယူသင်အွန်လိုင်းကိုရှာတှေ့နိုငျ။ မပျော်? ထို့နောက်သင်ကြိုဆိုထက်ပိုရှာတွေ့မှအခြားအစက်အပြောက်–ကျနော်တို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာအရေအတွက်ကိုစီမံကိန်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ခံရကျော်ကိုလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်နှင့်လမရှိခဲ့ဖူးပိုကောင်းတဲ့အချိန်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဒီပလက်ဖောင်း! နှင့်အတူတိမ်တိုက်သိုလှောင်ခြင်း၊အခမဲ့ပြွန်ဗီဒီယိုများ၊တစ်ဖက်ဆာဗာ၊တရားဝင်ဖိုရမ်နှင့်ပို။၊သင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်အံ့သြမိန်းရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်စီမံကိန်း။ မသာကြောင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းအစီအစဉ်မှထုတ်ပြန်ခြောက်အပြည့်အဝညစ်ညမ်းဂိမ်းများအတွက်လာမယ့် ၁၂ လအတည်းပိုပြီးဒီတော့အခြားမည်သည့်ထက်သာသောပလက်ဖောင်းသင်ဖွယ်ရှိရှာဖွေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်း။, လျှင်သင်ဖန်ဆင်းမယ့်ကဒီအကွာအဝေးအတွက်နေဆဲသင့်ရဲ့စာဖတ်ခြင်း၊ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်သင်မွေ့လျော်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းမှာအသင်းအဘို့ ၃D ကားဂိမ္းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားင့်ကြည့်ဖို့သင်ကအခြားအပေါ်။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်မယ်နှင့်အရာကိုကြည့်ရှုအံ့သြဖွယ်ရတနာသင်စောင့်ဆိုင်းနေကြမှာ ၃D ကားဂိမ္း!